Ny androaniko | Martsa 2017
[Ankapobeny ] 30 Martsa, 2017 00:25
Tsisy idirany amin'ny 29 martsa akory ity - sa moa misy ?
Tsy izay rahateo no antony maha-ato azy fa fizarana fotsiny ho an'izay tsy mba nahalala ny hiran'ny Antoko AKFM-KDRSM tamin'izany. Antoko sosialista iringiriny ny AKFM ary hira fanevan'ny komionisma ny "Internasionaly", nosoratan'i Eugène Pottier tamin'ny taona 1871 ary nasian'i Pierre Degeyter feony kosa tamin'ny 1888.
Voadika tamin'ny teny maromaro izy ka ity atolotry ny Amboaram-peon'ny Tanora Revolisionera AKFM-KDRSM ity ny amin'ny teny malagasy. Hatramin'ny taona 1944 dia hiram-pirenena sovietika ilay amin'ny teny rosiana.
[Fizahantany ] 26 Martsa, 2017 23:16
'Ireo Tany Dimy' ao avaratra-andrefan'i Italia.
Eto am-pampirimina ireo sary maro loatra anaty solosaina aho no nanapa-kevitra hoe maninona moa raha zaraina anaty blaogy ny resaka fizahantany sao mba mety hanintona sy hahasoa ny hafa ihany.
Tsy voatery handany vola be tokoa manko vao mahita tany fa afaka ampiarahana ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Tsy voatery ho ny vahiny avy any ivelany ihany koa no mihazakazaka mizaha ny toerana mahafinaritra fa ireo tompon-tany ihany koa.
Ka raha sendra manana fahafahana mandalo any Italia avaratra-andrefana ianao na dia faran'ny herinandro fotsiny ihany aza, dia mba misy toerana iray mahafinaritra ity : Le Cinque Terre, na Ireo Tany Dimy dia Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola ary Riomaggiore. Marihiko fa teny italianina fa tsy frantsay akory io anarany io fa mitovy firazanana moa ireo teny roa ireo ka mora aminareo ny maminany azy.
Italia dia saikanosy lava mahia izay nefa dia mbola bahanan'ny tangoron-tendrombohitra roa miavaka tsara izy dia ny Alpes izay mahasarona amin'ny sakany iray manontolo ny tendrony avaratra ary ny Apennins izay manivatsiva ny halavany iray manontolo, avy any avaratra ka hatrany amin'ny tendrony atsimo. Ka Le Cinque Terre dia tànana (tany no fiantsoana azy tamin'izany andro izany) miorina eny amoron'ny ranomasina Méditerranée saingy antsefatsefan-tendrombohitra ihany koa. Tsy mifanalavitra izy dimy ireo ary misy fiarandalamby sy arabe ihany koa mampitohy azy.
Ny tena tsara ho fantatra dia azo tsidihana tsara anatin'ny indray andro izy dimy ireo fa ny ilaina fotsiny angamba dia hoe manana toerana hatoriana iray alina eo amin'ny manodidina eo satria amin'ny maha-toerana manintona mpizahatany azy dia lafo ny saran'ny hotely ao. La Spezia ny tanàn-dehibe iray tena akaiky azy, fa izahay aza moa sendra nanao adidy tany Gênes no nanararaotra nankany. Napetrakay tamin'ny tanàna kely iray taty alohaloha ny fiara dia teo izahay no nandray fiarandalamby ary mifanohitra amin'izay nony hariva satria mbola niverina nody tany Gênes izahay.
Misy lalàn-tany (Sentieri, hoy rizareo, Sentiers hoy ny frantsay) mampitohy ireo Tany Dimy ireo, saingy taorian'ny tondran-dranobe tamin'ny taona 2011 izay nandrava zavatra betsaka tamin'ireo tanàna ireo dia misy ireo tsy mbola nisokatra tamin'izahay tany tamin'ny taona 2015. Fa raha manao iray amin'ireo fotsiny ihany aza dia tena efa zava-dehibe : 3 km manitsavitsa ala kirihitra, tanimboly (voatabia, voaloboka sns), miakatra sy midina tany kisilasila mandritra ny adiny iray eo ho eo. Ankoatra ny fotoana hakana aina, hankafizana ny hatsaran'ny zavaboary manodidina, ranomasina sy zava-maniry, hakana sary ihany koa. Sady fanatanjahantena no fahafinaretana no rivotra madio antoky ny fahasalamana e. Rehefa vizana manao besorongola dia afaka miakatra sy midina fiarandalamby amin'izay. Misy iray amin'ireo Tany mitirintirina eny an-tampon-kavoana, raha eny amoron-dranomasina ireo 4 sisa. Azo atao tsara ny miakatra tohatra mankeny raha mbola mavitrika fa misy ihany koa ny fiarabe mitatitra ireo mpizahatany.
Ka ny atao izany raha ho any dia mividy tapakila ho an'ny iray andro ka tafiditra anatin'io ny saran'ny fiaradalamby na impiry hiakatra sy hidina eo ianao anatin'ny indray andro, ny saran'ilay fiarabe mpitatitra miakatra eny amin'ilay tanàna iray an-tampon-tendrombohitra, ny saran'ny fidirana ireo lalàn-kely (eny, satria toy ny toerana be mpizahatany dia mila fikojakojana izy ireny). Izany hoe manatomboka tapakila iray eny am-piandohana ianao dia tsy mila miasa saina intsony.
Misy koa anefa safidy iray, dia ny fandehanana sambokely fa tsy fiarandalamby. Amin'izay dia avy any an-dranomasina ianao no maka fafiny mijery ireo Tany raha avy teny amin'ny Tany ianao teo no nijery ranomasina.
Na lanaka tanteraka aza ny hariva dia tsy heno akory izany fa efa nahazo ny anjarany ny maso sy ny saina. Asa iza loatra no namorona ny teny hoe fialan-tsasatra fa maika mahazo hasasarana rehefa fotoam-pialantsasatra satria mandeha mizaha tany - hihihi. Tokony hoe fiatoana amin'ny asa sy fialana amin'ny isan'andro mahazatra.
Ireo tahirintsary moa izany dia misy Dimy arakaraky ny Tany ka tsindrio isaky ny sary dia entiny any amin'ny pejy ianao.
Monterosso al Mare :
[Ankapobeny ] 09 Martsa, 2017 10:21
Mahay misaotra ny fiainana isika Malagasy.
Efa mampiaiky ny vahiny ny tsikitsiky tsy afaka eny amin'ny tavantsika Malagasy. Mbola manankery io hatramizao, hatratý amin'ny taona roa arivo mahery fito ambiny folo. Eny e, mitovitovy amintsika ihany koa zareo aziatika fa mba maro ihany koa ny mitsiky anaty fahoriana. Mbola manampy antsika ihany koa ny teknolojia hanadinoantsika izay rehetra manjò. Na mangidy aza ny ateraky ny loza voajanahary, ohatra, dia sary feno tsiky ny ankamaroan'ny sary ampitaina amin'ny alalan'ny teknolojia.
Dia ao koa ny fahaizantsika mamadika ny tranga ratsy ho fampisehoana tsy andoavam-bola, toy ity horonantsary tany Mananara-avaratra nandritra ny fandalovan'i Enawo tany afak'omaly ity.
Amintsika rehefa mbola tsy maty mitsitra dia mbola velon-tsiky isika. Mahay misaotra ny fiainana ny dikan'izay.
[Lasalasa fisainana ] 08 Martsa, 2017 21:46
Maromaro ihany ny tokony hanoratra ankehitriny hoe #MerciHiary
Manoloana ny sazy mihatra, herintaona an-tranomaizina, mahazo an'i Hiary dia manontany tena ihany aho hoe tena mahazo torimaso mamy daholo ve ireo nahatonga izao ?
Izaho manokana aloha dia manaiky fa misy fotoana tsy dia azoazoko ny fiaingany. Fa toetrany manokana moa izay ka tsy voatery ho tian'ny olona rehetra izy. Tsy mpinamana izahay fa matetika manaka-dresaka ao aminy aho rehefa resaka mahafinaritra ahy, satria misokatra ho an'ny rehetra ny pejiny. Fa eto kosa aho dia tena midera azy fa hatramizao aho aloha tsy mbola nahita resaka hoe miangavy "firaisankina" amin'ny mpiserasera rehetra i Hiary hanafaka azy any, na hoe nigonongonona fa tsy rariny ny nahazo azy. Nanaiky izy fa diso ary ny hafatra nampitainy koa mbola feno fahendrena hoe aza miditra amin'ny fiainan'ny olona. Tsapany ihany hoe tsongoy fon'olona tsongoy fon-tena.
Mbola nahatazana io vondrona natsangany io aho fony mbola hitan'ny rehetra avy aty ivelany izy io, ary isan'ny tsy nankatò ilay izy mihitsy satria halako bika tsy tiako tarehy no tena betsaka tao, ankoatran'ny adala sy ondraondranana rehetra faly nahazo fahalalahana hanaratsy sy hanambany ny hafa. Ilay izy rahateo vao resaka hoe fifosana dia tsy tsara mihitsy ny entiny na ahoana na ahoana hanadiovana ny fisiany. Raha hanatsara "pipole" angamba tsisy tsara ohatry ny miteny aminy mivantana hoe tsy mety izao, satria ny mifosa dia miresaka ilay olona rehefa tsy eo izy. Misy moa dia tena mivoana tanteraka. Ohatra iray, misy nanakiana ny fiankanjon'ny artista iray dia avy daholo babay sy lohavohitra amin'ny angady sy harona. Hatramin'ny hoe "mitaiza tanora ianao amin'ny mahaartista anao ka zao ve no fiankanjonao ?!!!" Oadrayyy, inona ary itony ! Ny ray aman-dreny no mitaiza ny zanany amin'ny fiankanjony fa tsy ny artista. Raha mihira izy hoe mifoha rongony dia mangalara daholo ianareo dia tena marina izay. Fa raha izay fiankanjony, soranjandiana io koh ! (tapitra ny ohatra fa mba tsetsatsetsa).
Ka hoy aho hoe misimisy ihany ny ankolafin'olona tokony hisaotra an'i Hiary amin'zao ora maizina ho azy izao :
- ireo nihoa-pefy tamin'ny resaka rehetra tao amin'ilay vondrona ka nahatonga ny fitoriana nony farany, fa dia nanaram-po mihitsy nomeny sehatra nifosana.
- ireo mpiandraikitra ny vondrona "afaka madiodio", tsy voaroiroy kely akory fa efa misy an'i Hiary nijoro tamin'ny tongony nisolo vaika ny ankalana.
- ny fitondram-panjakana nahazo zanak'ondry atao sorona, ho fampitandremana fa zay mbola mitetateta eo dia hifafa ny kihony toa an'i Hiary.
- ireo mantamanta vava fa nahay nilamina ihany, tsy manakotaba ny fitondram-panjakana intsony fa matahotra sao hanao vakansy herintaona eny ambany atsinanana.
Ny mampalahelo amin'ity fotsiny dia tsy afaka hampiseho firaisankina betsaka ankoatra ny #FreeHiary ny blaogasifera malagasy satria resaka fiainan'olona manokana no voakitika tamin'ilay tantara fa tsy hoe niady ny tsy mety ataon'ny mpitondra izy ka niharan'ny tsindrihazolena. Raha ity faharoa ity manko dia afaka niady ny hamotsorana azy ny vahoaka satria "gadra politika" izy amin'izay.
Izao no hoe bibilava sinambotr'ankizy... Fa araka ny fiteny iray hoe izay tsy mahafaty dia mampatanjaka, mahabe hery (hoy aza ny vazivazin'ny rainilita hoe izay tsy mahafaty mahalasa faikam-boto). Miampy ny fianarana tsy matoky olona intsony fa ny vadiny ihany sisa no nanaiky fa nanoronoro hevitra azy tao amin'ny fiandraiketana ny vondrona, ka nampidi-kizo azy saika nampiaraka nigadra azy mivady. Ankoatra izay dia efa lesona hay hatramizay hoe havako raha misy patsa no betsaka. Dia mankahery azy manokana sy ny fianakaviana keliny tokoa no mba azoko atao angamba. Asa raha mbola haverina hodinihana ny momba azy atsy ho atsy na dia miandry ny herintaona ivoahana fotsiny no hany azo atao...
Misy zavatra iray mampitsiky ahy fotsiny eto fa miparitaka be moa ao ny sarin'i Justin Trudeau, praiminisitra kanadiana. Nivoaka daholo ny sariny fahiny fa tena bôgôsy hatry ny fahakeliny ingahy. Lasa gaigy aby ny ampela ao amin'ny facebook. Dia avy aho amin'ny vazivaziko mahazatra hoe mba itadiavo ny sarin'ny praiministrantsika fony adolantsento koa nama fa mba asehontsika koa ny antsika a... Tsisy sahy namaly lay resaka, nefa raha talohaloha teo izay dia asa angamba zay vanitika tsy vanitika tao - laolina. Isa Folo ho an-drafanja fa tena nandaitra ny nanagadrana an'i Hiary, mbola tsy mitoko ary angamba tsy hitoko intsony ny mpiserasera malagasy. Tampina ny daomy.
[Ankapobeny ] 02 Martsa, 2017 23:53
Setroka fotsiny fa tsisy mendy akory.
Rehefa nijery ity horonantsary ity ambany ity aho dia mampahatsiaro ahy olona sy olana vao avy natrehan'ny fiarahamoninay malagasy teto Roma vao tsy ela ilay izy.
Tamin'izay dia naverin'ilay namana iray taminay hoe "efa nampiomana anareo aho fa savoamboana no betsaka fa tsisy apoaka firy eo" - hahaha - zany hoe toa ireto kivindro ireto mihitsy : rehefa misy elanelana mampisaraka dia samy miseho ho dadany daholo fa raha vao esorina io manelanelana io dia hay tsy mankaiza fa samy mody gisa an !
Hoy ny fitenin-dr'i Lita aty aminay hoe "setroka fotsiny fa tsy hita zay hena mendy" - huhuhu.